Sheekada filimka Namaste England: Arjun iyo Parineeti waa dadaaleen balse sheeko fiican kuma dhicin – Filimside.net
Sheekada filimka Namaste England: Arjun iyo Parineeti waa dadaaleen balse sheeko fiican kuma dhicin
October 18, 2018 Zakarie Abdi
Namaste England waa filim uu Director ka yahay ruug cadaa Vipul Shah oo kusoo laabtay kursiga filim sameynta mudo 8-sano kadib waxaana laga rajeynaa sheeko wacan oo maan gal ah inuu la imaado.
Filimka Namaste England waa taxane qayb ka ah filimkii Namastey London kaasi oo ay sanadii 2007 Akshay Kumar iyo Katrina Kaif wada jileen sheeko ahaana aad loo amaanay.
Haddaba su’aasha si weydiinta mudan ayaa ah Namaste England ma yahay filim ka sheeko wanaagsan Namastey London mise waa mashruuc fariintiisa aan nuxur laheyn?
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 15-daqiiqo.
Fariinta Filimka Namaste England Oo Kooban: waa sheeko ku saabsan lamaane farqi jaceyl iyo mid riyo u dhaxeeyo. Param (Arjun Kapoor) iyo Jasmeet (Parineeti Chopra) waxay kasoo jeedaan tuulo yar oo gobolka Punjab ka tirsan waxaana dhaceyso labadooda inay is jeclaadaan.
Jasmeet (Parineeti Chopra) oo xiiseyo ka shaqeynta qalabka dumarka isku qurxiyaan waxay shaqo ka heleysaa Amritsar waxayna halkaas ka shaqeeysaa isbuucii sedex maalmood, laakiin Jasmeet waxaa culees ku haayo awoowgeed (Shivendra Mahal) oo aan rabin dumarka shaqeeyaan waxayna Jasmeet marwalbo isku daydaa in culeeska awoowgeed ku haayo ay qarsato.
Param (Arjun) ayaa dareemayo culeeska Jasmeet (Parineeti) saaran wuxuuna usoo jeedinaa inuu guursado kadibna masuuliyeeda isaga kusoo wareegto una ogolaado inay shaqeesato.
Sidaa darteed Param reerkiisa waxay imaanayaan guriga Jasmeet si gabadhaan loo siiyo wiilkooda laakiin Jasmeet awoowgeeda guurkan inuu dhaco wuxuu shuruud kaga dhigaa in gabadhiisa aysan marnaba shaqeynin oo ay guri joogto noqoto marka Param guursado.
Waxaa dhaceyso in Param iyo Jasmeet la isku guurinaayo, mudo hal sano kadib Jasmeet waxay la kulmeysaa saaxiibteed Harpreet (Mallika Dua) oo UK iyada iyo seygeeda ku nool farxad weyna halkaas ku heestaa waana arin Jasmeet ku abuureyso in iyadana UK u guurto oo ay nolol heer sare ah halkaas ka baadi goobto.
Param isagana xaaskiisa talada ay usoo jeedisay wuu la qaadanaa oo ah inay UK aadaan balse Param hal culees ayaa heesto oo ah inuusan dalka ka bixi karin, waayo Param maalinta uu guurkiisa dhacaayay wuxuu la dagaalay saaxiibkiis Gurpreet (Anjum Batra) waana nin waaxda socdaalka la shaqeeyo oo Param u diidayo inuu dal ku gal helo ama Visa.
Sidaa darteed Jasmeet waxay la imaaneysaa qorshe ah marka kowaad inay iyada UK aado kadibna marka ay sharci deganaansho hesho ay seygeeda Param usoo dacwooto si UK loogu keeno, waxaana dhaceyso in Param uu xaaskiisa ku raaco fikrada ay usoo jeedisay.
Laakiin Jasmet marka ay UK tagto nolol kale ayay dhexda ka galee waxayna kasoo bixi weynee balankii ay seygeeda ka qaaday waana waxa loo daawan doono qeybaha xiga ee filimkan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Namaste England: Director Vipul Amrutlal Shah lama jaan qaadi karo sheekooyinka jaceylka xiligaan Bollywood-ka sameeyaan waxaana la moodaa filim sameynta inuu hilmaamay madaama filimkiisa uusan laheyn isku xir dhameestiran, weliba wuxuu isku dayay filimkii Namastey London inuu wax kasoo amaahdo waana fashilka ugu weyn ee ku dhacay waxaa u fiicneyd fariinta filimkan inuu ka dhigo mid madax banaan lana tayeeyay.
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Arjun Kapoor bandhig wacan lama imaanin wuxuu u eg yahay mid aan xiiso u qabin sameynta filimkan miisaankiisa badan yahay sidoo kalena xamaasada shaashada aysan ka muuqanin!
Parineeti Chopra waa dadaashay bandhig ahaana Arjun wey ka wanaagsan tahay laakiin sheekada mashruucaan oo aad u liidato awgeed iyadana saameyn ahaan lama xasuusan doono.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Namaste England:
Bandhiga Parineeti Chopra oo ah mid wacan kuna soo jiidanayo.
Album-ka heesihiisa oo kusoo jiidanayaan.
Muuqaalada goobaha lagu duubay oo kusoo jiidanayaan filimkan.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Namaste England:
Sheekada filimkan qaabka loo qoray oo ah mid aad u liidato waxaana qoreen sheekadiisa Ritesh Shah iyo Suresh Nair waxaana la yaab ah in labadan ay yihiin kuwa qoreen aflaanta sheekooyinkooda aan laga daaleyn sida AIRLIFT , D-DAY , RAID , MARDAANI !
Qaabka sheekada Director Vipul Shah isugu daba riday oo aad u liidato weliba qaybaha dambe siweyn ayaa loogu caajisayaa.
Arjun Kapoor bandhigiisa oo aad u liito kamana muuqato fir fircooni ku aadan inuu hogaaminta filimkan ku wanaagsanaa.
Qaabka filimkan loo faaf reebay oo leh naxdin weyn micnaha maba u eko filim masuuliyad la iska saaray oo laga jar jaray wax walbo oo dayacaad ka muuqato ama aan loo baahneyn waxaana masuuliyadaas qaadanayo Amitabh Shukla oo filimkan faaf reebay!
Qiimeynta Sheekada Filimka: 2/5 (Labo Xidig)
Gunaanad: Namaste England waa isku day siweyn u fashilmay qaladna waxaa ahayd in lala xariiriyo filimkii Classic ahaa Namastey London ee Akshay Kumar iyo Katrina Kaif sameeyeen 11-sano ka hor, waayo mashruucan malahan sheeko kusoo jiidaneyso agaasinkiisana waa mid aad u liito laakiin waxaa la yaab ah isla hal Director inuu sameeyay Namaste England iyo Namastey London waana Vipul Shah!
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Namaste England oo ay Arjun iyo Parineeti wada jileen:
Waxaa Aqrisay 573